Conan Doyle: chiremba, mubati wenhabvu, Sir, wezvemweya ... | Zvazvino Zvinyorwa
Conan Doyle: chiremba, mubati wenhabvu, Sir, anoita zvemidzimu ...
alex martinez | | Vanyori
Mufananidzo waConan Doyle.
Athur Conan Doyle, baba vengano Sherlock Holmes, ndemumwe weavo vezvakaitika kare zvekuti paunoverenga nyaya yake ukaona hupenyu hwake unoona kunakidza uye kushamisa chimiro chake. Zviitiko izvo, zvinosuruvarisa, kurarama mumumvuri webasa rake. Kunyangwe izvi, neruzivo rwake uye ongororo, iyi mibvunzo yese inotipa mwenje diki kana zvasvika pakunzwisisa hunhu hweanofungidzirwa baba veyeye mutikitivha.
Zvine musoro, isu tese tinomuziva nekuda kwebasa rake rekunyora. Basa iro raita kuti munyori weScotland ave mumwe wevanonyanya kukosha vanyori munhoroondo. Chero zvazvingaitika, hupenyu hwake hwaisangoenderana nebasa rake semunyori asi yaizivikanwa nezvimwe zviitiko zvakawanda zvakaita kuti awane mukurumbira uye mukurumbira.
Chekutanga pane zvese iwe unofanirwa kuyeuka iye Conan Doyle, muhudiki hwake, haana kumbofunga nezvekuve munyori akabudirira. Neichi chikonzero, akafunga kudzidza zvemishonga. Zvidzidzo zvakapera neu doctorate muna 1885 kubudikidza nedzidziso yechirwere chetsinga "Tabes dorsal".Ruzivo rwake mune zvekurapa rwakamubatsira zvikuru mukunyora zvinyorwa zvake..
Kunyangwe ruzivo urwu, pamwe nedzimwe nyaya, zvakatorwawo nemupurisa uye graphic art, Jesús Delgado, kusimbisa pabasa rake, "Kuzivikanwa kwechokwadi kwaJack the Ripper", kuti munyori anga ari iye chaiye asinganzwisisike mhondi akatyisidzira London mukupera kwezana ramakore rechiXNUMX.
Kufungidzira kune njodzi asi kunonakidza kunozadza chimiro chemunyori zvakanyanya kana zvichibvira nekufungidzira. Kunyangwe isu tisingakwanise kuvimbisa kupomerwa uku, tinogona kusimbisa kuti chimwe chezvaakanyanya kufarira kuita mitambo. Conan Doyle aive muchengeti wenhabvu muchikwata cheamateur Portsmouth Association Nhabvu Nhabvu. Chikwata chakashanduka mune yazvino Portsmouth Nhabvu Kirabhu.
Naizvozvo, kirabhu yeChirungu ine mukana wekuva nehunhu hwakajeka seye wekutanga mubati wenhau munhoroondo yayo Kunze kwebhola, munyori aidzidzirawo mimwe mitambo tsiva, gorofu nekiriketi zvakabuda pachena. Mune yekupedzisira, akatozove nyanzvi mune Marylebone Cricket Kirabhu.
Kune rimwe divi, pane kuda kuziva kuti ini pachangu ndinowana kwakanyanya kunakidza. Chokwadi isu tese tinogamuchira sechokwadi chokwadi chekuti, nekuda kwebasa rake rekunyora, akave nemimba semurume munyoro weBritain Humambo. Chinhu chekuti kana tikachitenda isu tinenge tichikanganisa zvakakomba.
Conan Doyle, zvinopesana nepfungwa iyi, akahwina mubairo uyu nekuda kwekutsigira kwake kunonzi "Hondo yeMabhunu". Iyi kukonana kwekoloni kwakamutsa kutsoropodzwa kwakasimba kubva kuBritish huwandu. Chinhu chakaita kuti hwaro hwehukama hwehumambo hwuzungunuke, zvichikonzera kusavimbika kwevanhu vakapoterera boka rinotonga.
Munyori wenhau, kuratidza rutsigiro rwake uye kugutsa chikamu chevagari vasina kugutsikana nezvekudiwa kwekutora chikamu muhondo iyi, akaburitsa kabhuku kari pasi pezita rekuti: "Hondo yekumaodzanyemba kweAfrica: zvikonzero nekusimudzira." Iko iko kwekubatana uku pamwe nekolonial zvido zvehumambo baba vaSherlock vakapihwa kuzivikanwa kwakadai..
Pakupedzisira mumwe yezvakanyanya kuvaraidza kwaive zvekunamata uye zvese zvine chekuita neparapsychology. Neiyi nzira, iye akapinda mumisangano yakawanda uye aipindirana nevanoonekera zvikuru masvikiro enguva yake. Kunyange akauya kuva nehukama hwepedyo nemuroyi anopukunyuka Houdini. Hushamwari uhwo, zvese zvinotaurwa, zvakazoputsika nezvikonzero zvakasiyana.
Hupenyu hwakanyanya uye hunoshamisa hunoita kuti Conan Doyle ave mumwe wevanonyanya kufadza mavara mumabhuku epasirese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Conan Doyle: chiremba, mubati wenhabvu, Sir, anoita zvemidzimu ...
XXVIII Autumn Fair yeGwaro rekare uye rekare muMadrid.
Iwe unoda here kuva munyori? Tevedza aya matipi kubva Umberto Eco